Brexit: ka dib markii labaad ee diidmada heshiiska, Theresa May waxay kor u qaadeysaa natiijada Xubnahan - TELES RELAY
ACCUEIL » kale • DHAQAALAHA • International Kuujinta: Ka dib markii diidmadii labaad ee heshiiska, Theresa May waxay si aan rasmi ah u dhigeysaa ku-xigeennada
Brexit: ka dib markii labaad oo diidmo ah heshiiska, Theresa May waxay kor u qaadday natiijada ku xigeennada
Eliseo Emma Kamgang 14 March 2019
Si dibad-bax loogu dhiso saraakiisha la soo doorto, ra'iisul-wasaaraha ayaa ku hanjabay in dib loo dhigo si aan qarsoodi lahayn loo soo saaro Midowga Yurub. Codbixinta saddexaad ayaa la qorshaynayaa, halka Konserfatifku gooni u goosanayaan.
Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May oo ka tirsan Golaha Wakiillada London intii lagu jiray dooddii 13 Brexit. JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / REUTERS
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa laga badiyay codkeeda, laakiin ma uu hayn. Iyo laga yaabee, waxaa hadda bixinta. Waxa hubaal ah in iyadu ayaa weli dib u dhac kale cajiib Tuesday 12 March markii heshiis Brexit ay la saxiixatay Midowga Yurub (EU) ayaa la diiday markii labaad by taliyayaashii. Waxa hubaal ah, ayay mar kale qaatay raaxo fiidkii ah Wednesday 13 March weli Baarlamaanka, markii dhawr ka mid ah wasiirrada uu ku dhiiraday set ee xisbiga Konserfatifka ayay keenaysaa oo sidaas daraaddeed amar gaar ah, si ay u codeeyaan wax ka beddelka ah marka laga reebo wax soo saarka ah EU oo aan heshiis ("Wax heshiis ah ma jiro"), xitaa kadib taariikhda la beegsanayo 29 Maarso.
Laakiin istiraatijiyad ah si tartiib tartiib ah urura Xildhibaanada mucaaradka ku hanjabay in uu ku wareejiyo si Brexit kalends ay ballan qaaday in ay cod-bixiyayaasha ay a, midho u dhali kari lahaa.
Codka saddexaad ee ku saabsan "Heshiiska" iyadoo Brussels la qorsheyn doono Arbacada 20 Maarso, ayay ku dhawaaqday habeenka Arbacada. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, afaraad ka hor inta aanad dhicin ee 29. Adigoo cadaadis saaran saacadda iyo xajmiga, Theresa May wuxuu gaari karaa hadafkeedii: Ugu dambeyntii wuxuu helayaa ansixinta baarlamaaniga ah ee heshiiskii kuxirnaa Brexit.
Bartamihii Febraayo, wada sheekeysi gaar ah oo uu qabtay madaxa taliyaha Ingiriiska ee Olly Robbins oo ku yaala hoteel ku yaala Brussels, iyo oo ay soo qaadeen wariye ka socda ITV, ayaa shaaca ka qaaday istiraatijiyaddani in Theresa May u muuqatay inay ansixisay habeenkii arbacada ee Golaha Shacabka. Sida ballanqaadka ah, waxay soo gudbin doontaa khamiista 14 March, xubnuhu waxay u dirayaan mooshin ay ku dalbanayaan in dib loo dhigo waqtiga kama-dambaysta ah ee 29. Laakiin tani waa mid kama dambeys ah.
Maqaalkani waxa uu markii ugu horaysay la daabacay on https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/14/brexit-apres-le-deuxieme-rejet-de-l-accord-theresa-may-pose-un -ultimatum-to-deputes_5435685_3210.html
Hindiya: Wadahadal lama leh Pakistan haddii aysan ka hor tagin kooxaha argagixisada: Sushma Swaraj | India News
BIXIN KAMA DHIMISYADU WAXAY TAHAY?